Arag iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTM - Geofumadas
Nofeembar, 2017 Downloads, Google Earth / Maps
Waxaan ku hayaa xogta Google Earth, waxaanan rabaa inaan ku sawiro iskuduwaha 'Excel'. Sidaad aragtay waa dhul leh 7 geeso iyo guri leh afar geedo.
Keydso xogta Google Earth.
Si aad u soo dejiso xogtan, waxaad ku riixdaa "My Places", oo dooro «Save place as ...»
Si aad u noqoto feyl uu leeyahay khadadka, dhibcaha iyo alaabooyinka aan u bedelay calaamadaha, faylka lama kaydin doono kml fudud laakiin sida Kmz.
Waa maxay faylka KMZ?
Kmz waa xirmo faylal isku duuban oo kml ah. Marka sida ugu fudud ee loo kala furfuro waa sidii aan ku samayn lahayn faylka .zip ama .rar.
Sida ku cad jaantuska soo socda, waxaa laga yaabaa inaannaan arkin kordhinta faylka. Si tan loo sameeyo, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
1. Fursadda lagu eegayo kordhinta faylasha ayaa la qabsadaa, laga bilaabo 'View' tab ee browserka faylka.
2. Beddel kordhinta laga bilaabo .kmz illaa .zip. Si tan loo sameeyo, gujis jilicsan ayaa lagu sameeyaa feylka, iyo xogta ka dib barta ayaa wax laga beddelay. Waxaan aqbalnaa fariinta soo muuqan doonta, taas oo noo sheegaysa inaan badalayno kordhinta faylka ayna ka dhigi karto mid aan la isticmaali karin.
3. Faylka waa la furay. Badhanka midig ee midig, oo xulo "U soo saar ...". Xaaladayada, feylka waxaa loo yaqaan «Geofumadas Classroom Terrain».
Sida aan arki karno, faylka ayaa la abuuray, isla markiiba waxaad arki kartaa faylka kml oo la yiraahdo "doc.kml" iyo fayl la yiraahdo "faylasha" oo ku jira xogta la xidhiidha, guud ahaan sawirrada.
KML furan ka Excel
Waa maxay faylka Kml?
Kml waa qaab caan ku ah Google Earth, kaas oo ka horreeyay shirkadda Keyhole, sidaa darteedna loo yaqaan (Keyhole Markup Language), sidaa darteed, waa feyl leh qaab dhismeedka XML (eXtensible Markup Language). Marka, ahaanshaha feylka XML waa inuu noqon karaa mid laga arki karo Excel:
1 Waxaan bedelnay kordhinteeda .kml ilaa .xml.
2. Faylka waxaan ka furaynaa Excel. Xaaladdayda, inaan isticmaalayo Excel 2015, waxaan helayaa farriin haddii aan doonayo inaan u arko sidii miiska XML, sida buug la akhrin karo oo keliya ama haddii aan doonayo inaan isticmaalo guddiga isha ee XML. Waxaan doortaa ikhtiyaarka koowaad.
3 Waxaan raadineynaa liiska joornaalada juqraafi.
4 Waxaan u guurineynaa fayl cusub.
Iyo voila, hadda waxaan haynaa faylka iskuduwaha Google Earth, ee miiska 'Excel'. Laga soo bilaabo safka 29, sadarka X wuxuu u muuqdaa magacyada geesaha, iyo loolka / Longitude isuduwaha safka AH. Waxaan qariyey tiirarka qaar, si aad u aragto in safafka 40 iyo 41 aad ka arki karto labada geesood ee aan sawiray, iyo silsiladooda iskuduwaha.
Sidaa darteed, adigoo koobiyeynaya X tiirarka X iyo midda AH, waxaad leedahay walxaha iyo isku-duwayaasha dhibcaha Google Earth.
Waxaan rajeyneynaa in kor ku xusan ay kaa caawisay inaad fahamto sida loo keydiyo xogta Google Earth ee faylka kmz, iyo sidoo kale si loo fahmo sida loo gudbiyo faylka kmz ee kml, ugu dambeyn sida loo eego Google Earth iskuduwaha isticmaalka Excel.
Ma xiiseyneysaa wax kale?
Ka beddel xogta Google Earth ilaa UTM.
Haddaba, haddii aad rabto in loogu badalo kuwa wadataa juquraafi kaas oo ay leeyihiin sida degrees tobanle iyo UNku iyo dhigaha isuduwaha in format UTM saadaaliyey ah, markaas waxaad isticmaali kartaa template ku jira in.
Waa maxay isku duubnaanta UTM?
UTM (Universal Traverso Mercator) waa nidaam in kala qaybinaya caalamka meelaha degrees 60 6 kasta bedelay xisaab inay eg ellipsoid ah saadaaliyey on Roobka a; sida waxaa lagu sharxay maqaalkan. iyo fiidiyowgaan.
Sidaad arki karto, halkaas waxaad kuqortaa iskuduwaha kor lagu muujiyey. Natiijo ahaan, waxaad yeelan doontaa isku-duwaha X, Y iyo sidoo kale UTM Zone oo lagu calaamadeeyay safka cagaaran, kaas oo tusaalahaas ka muuqda Aagga 16.
Dir macluumaadka Google Earth ilaa AutoCAD.
Si aad awood ugu yeelatid inaad u dirto xogta AutoCAD, kaliya waa inaad dhaqaajisaa amarka dhibco badan. Tani waxay ku jirtaa tabta "Sawir", sida ku cad sawirka midigta.
Markaad kiciso amarrada Dhexdhexaadka Dhexdhexaadka ah, nuqul ka samee xogta laga soo diro template Excel, laga soo bilaabo safka ugu dambeeya, si aad u hesho line-ka "AutoCAD".
Iyada oo tan, iskuduwahaaga ayaa la sameeyay. Si aad u aragto iyaga, waad dhaweyn kartaa / Dhammaan.
Waxaad ku heli kartaa template-ka Bixinta ama Kaarka Amaahda. Markaad bixinaysid lacag bixinta, waxaad heleysaa emayl leh xiriirka soo degsashada. Iibsashada shaxanka ayaa xaq kuu siineysa inaad u soo dirto emayl taageero ah, haddii ay dhacdo inaad dhibaato ku qabtid qaab-dhismeedka.
Post Previous" Hore Sawirrada isku-dhafan ee AutoCAD laga bilaabo faylka CSV Excel
Post Next Khibradeyda aan isticmaalayo Google Earth ee CadastreNext »
5 Jawaab ah "Arag iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTM"
Waa xishood, in badan ama Google Earth ma oggola in la abuuro geeso badan oo leh sifooyin astaamo ah. Barnaamijka "GIS" barnaamijka GIS iyo u dir Google Earth.
Gília Josina isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan ku dari karaa baqshad aan google-ka ahayn?
Waxaa muhiim ah in la dhigo qodobbada ugu horeysa oo ay ku daraan ama baqshi ahaan sida caadiga ah si ay u yareeyaan aagga. Laakiin maxaa dhacaya marka kando faço ama Zoom ku bixiso goob shaqo, ama ponto não sobrepõe ao ama polygon, deixando fogaan weyn oo qalad u dhexeeya ama poligon eo ponto.
Ou seja, waxaan u baahanahay inaan ku daro garoon aan google-ka ahayn (Waxay noqon kartaa mid sareeya, melhor)
Waxaan rajeynayaa inaan isku hagaajiyo muito obrigada!
hiep nguyenba isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan ku buuxi faylka adigoo ku duuban fariin qoraal ah, adigoo fariin qoraal ah u diri email nguyenbahiep775@gmail.com. Rất cảm ơn anh.
Xidhiidhkan ayaa ah noocyada kala duwan ee kala duwan ee aad ku heli kartid isku-duubnida iskudhaca
Fabio isagu wuxuu leeyahay:
hiofumadas, talooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan isticmaalka dhulka google, waxay iga caawisaa wax badan shaqadayda.
taageerada, meesha aan ka soo bixi karo FORM TO TRANSFORM LIST OF COOGOOTICAL COORDINATES (X, Y, Z) UTM, waxaan u baahanahay.
Waxaan sugayaa faalladaada